Mpanamboatra paompy vy - Mpamatsy paompy vy any Shina
Paompy vy vy amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny paompy manual dia mampiasa endrika plunger indroa, miaraka amin'ny fivoahan'ny tsindry ambany ary ny fivoahan'ny tsindry avo lenta, fa rehefa misy paompy avo lenta ny paompy, kely dia kely ny fikorianany ary ambany ny asany. Raisiko ho toy ny ohatra ny paompin-tanako, ny masontsivana manokana dia ireto manaraka ireto: tsindry nahazo naoty (tsindry avo) 63 MPa; naoty famoahana 1,5 ml / ora; tsindry famoahana tsindry ambany 5-10 MPa; tsindry ambany teôria teôlika 12 ml / ora; tanky solika hydraulic ...
Paompy Garden Iron Cast
Fampiharana Cast Garden Garden Pumps 1. Ny loharano azo avy amin'ny kofehy mifono kambana sy fitaovana fanamafisana. Ny tsindry miasa amin'ny menaka hydraulic dia mety hahatratra 300mpa. Amin'izao fotoana izao, ny arintany, ny herinaratra, ny indostrian'ny simika ary ny indostria hafa ao Shina dia mampiasa voanjo hydraulic mahery na fanjava-by, miaraka amina paompy faniriana alina mahery avo lenta ho loharanon-kery, izay nahitana vokatra tsara. 2. Fitaovana mekanika malefaka kôndra na fidirana an-tampon'ny varingarina mifanaraka amin'ny famongorana p ...
paompy tanana zaridaina vy
paompy vy zaridaina mandefa fampiharana 1. Ny loharano azo avy amin'ny kofehy mifono kambana sy fitaovana fanamafisana. Ny tsindry miasa amin'ny menaka hydraulic dia mety hahatratra 300mpa. Amin'izao fotoana izao, ny arintany, ny herinaratra, ny indostrian'ny simika ary ny indostria hafa ao Shina dia mampiasa voanjo hydraulic mahery na fanjava-by, miaraka amina paompy faniriana alina mahery avo lenta ho loharanon-kery, izay nahitana vokatra tsara. 2. Fitaovana mekanika malama kodiarana na fidirana an-tampon'ny varingarina mifanaraka amin'ny disassem ...
Pump Iron Hand Pump Pump Manual hydraulic pump dia karazana paompy menaka fanerena avo lenta izay afaka manova ny angovo mekanika manual ho lasa angovo hydraulic. Izy io dia afaka manatanteraka hetsika isan-karazany toy ny fampiakarana, famoritana, fanitsiana, fanetezana, fikolokoloana, fanangonana, fanaparitahana ary fananganana trano sy fanamboarana miaramila, sns. Fitaovana paompy solika hydraulic: fanerena be, tanana, faran'izay kely, mora entina, mora miasa, fampiharana marobe. Fandehanana haingam-pandeha avo roa heny, aut ...